Iibso shaararka cudbi-dheer ee aan caadiga ahayn ee daabacan shaararka dumarka - dhoofin bilaash ah & Canshuur la'aan | WoopShop®
Shaadhka Dumarka Dumarka ah ee Dahaarka ah ee Dahaarka ah ee Dahabka ah
Shaadhka Dumarka Dumarka ah ee Dahaarka ah ee Dahaarka ah ee Dahabka ah - L / 17 gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Lambarka Moodalka: F12797
Mawduuca dharka: 31% (loo dhan yahay) - 50% (loo dhan yahay)
Shaati wanaagsan, daabacaaddu waa u dhigantaa. Haddii aad rabto in ka badan, qaado + 1 cabbir. Oo markaa cabbirka cabbirka kuma fadhiisan doono foomka.
Shaadhku waa super. XL wuxuu si fiican u fadhiistay dhererka 175 (inkasta oo ay u muuqato in gacmahoodu ay yar yihiin gaaban). Maaddadu waa mid wacan, oo si caadi ah loo tolo.
Shaadhka ayaa si habsami leh loo tolaa, duntu ma soo baxaan, synthetics. Guud ahaan, waan ka helay.
Maaddadu waa wanaagsan tahay, cufan. Shaadhku ma dhuuban, ma dhalaalayo. Waxaan dalbaday mid kale, midab kale, cabbirka ayaa lagu doortay si waafaqsan miiska, soo dhawaaday.
Shaadh fiican. Bixinta waxay ahayd mid aad u degdeg badan!